China ịgbado ọkụ Robot Series na China | Daya
Eldgbado ọkụ robot usoro JZJ06C-180
Eldgbado ọkụ robot usoro JZJ06C-144
Ịgbado ọkụ robot usoro JZJ06C-160
Gbado ọkụ robot usoro JZJ06C-200
Ịgbado ọkụ robot bụ ulo oru robot aku ịgbado ọkụ (gụnyere ịcha na spraying). Dị ka nkọwa nke nzukọ mba ụwa maka Standardization (ISO) si dị, ụlọ ọrụ robot bụ robot ọkọlọtọ ịgbado ọkụ, ụlọ ọrụ robot bụ ọtụtụ ebumnuche, a na-ekwughachi ihe ejizi ihe eji arụ ọrụ nwere akụrụngwa atọ ma ọ bụ karịa, nke a na-eji na mpaghara nke ngwa ọrụ aka. Iji mee ka ngwa ngwa dị iche iche gbanwee, interface igwe nke ikpeazụ axis nke robot na-abụkarị njikọ njikọta, nke enwere ike ijikọ ya na ngwaọrụ dị iche iche ma ọ bụ njedebe njedebe. Gbado ọkụ robot bụ iji wụnye mgbado ọkụ ma ọ bụ ịgbado ọkụ (ịcha) egbe na njedebe nkedo nke robot ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nke mere na ọ nwere ike mepụta ịgbado ọkụ, ịcha ma ọ bụ ịgba mmiri ọkụ.
Robot ịgbado ọkụ bụ ojiji nke mechanized programmable ngwaọrụ (ígwè ọrụ na-), nke kpamkpam automate a ịgbado ọkụ usoro site ma n'ịrụ na ịgbadozi na-ejizi akụkụ. Usoro ndị dị ka ịgbado ọkụ gas metal arc, ọ bụ ezie na ọ na-akpaghị aka na-akpaghị aka, abụghị ihe kwekọrọ na ịgbado ọkụ robot, ebe ọ bụ na onye ọrụ mmadụ na-akwadebe mgbe ụfọdụ ihe ndị a ga-agbanye. A na-ejikarị ịgbado ọkụ robot maka ịgbado ọkụ ntụpọ na arc ịgbado ọkụ na ngwa ọrụ mmepụta dị elu, dịka ụlọ ọrụ ụgbọ ala.
Ngwadogwu robot bụ ngwa ọhụrụ nke robotics, ọ bụ ezie na e bu ụzọ webata ígwè ọrụ na ụlọ ọrụ US na 1960. Iji igwe eji arụ ọrụ na ịgbado ọkụ ebupụtaghị ruo afọ 1980, mgbe ụlọ ọrụ ụgbọala na-arụ ọrụ malitere iji igwe mgbanye ọtụtụ maka ịgbado ọkụ. Kemgbe ahụ, ọnụ ọgụgụ nke ígwè ọrụ eji arụ ọrụ na nọmba nke ngwa ha amụbaala nke ukwuu. Na 2005, e jiri ihe karịrị rọbọt 120,000 na ụlọ ọrụ North America, ihe dị ka ọkara n'ime ha maka ịgbado ọkụ.  Uto bu ihe ejidere site na ugwo akụrụngwa di elu, yana ihe mgbochi na-esi na ngwa ngwa di elu.
Robot arc ịgbado ọkụ amalitela na-eto eto ngwa ngwa n'oge na-adịbeghị anya, ọ na-enyekwa iwu maka 20% nke ngwa robot mmepụta. Akụkụ bụ isi nke arc ịgbado ọkụ robot bụ manipulator ma ọ bụ igwe na njikwa, nke na-arụ ọrụ dị ka "ụbụrụ" robot. Onye na-eme ihe na-eme ka robot na-agagharị, a na-ahazi usoro nke usoro ndị a n'ọtụtụ ụdị dị iche iche, dịka SCARA na robotian coordinate robot, nke na-eji usoro nhazi dị iche iche eduzi igwe nke igwe.
Gbado ọkụ Robot Series Teknụzụ oke
Nke gara aga: Isii Axis Robot Series
Osote: Zọ Die